I-Luxury Villa Mono Titi 4 Bedroom Villa - I-Airbnb
I-Luxury Villa Mono Titi 4 Bedroom Villa
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMatt
I-Casa Mono Titi yeyona nto iphambili kumagumbi okulala ayi-4, indawo yokuqesha ulwandle naphi na kwindawo yeManuel Antonio. Le ndawo ekwi-cul de sac yabucala ekwintsapho ekhuselekileyo kwi-Pacific Canyon Drive, iyindawo ekhethekileyo yetropiki, ineendawo eziphangaleleyo, ezinembonakalo kunye neyona ndawo kunzima ukuyifanisa.
Ukufika kwakho kule ndawo kuhamba ngezitepsi ezijikelezwe ziigadi zetropiki ezikusa kwindawo yakho. Indawo esetyenziswa ngumntu wonke, ekumgangatho ophantsi wekhaya inekhitshi elipheleleyo nendawo yokutyela evulekileyo kunye netafile entle yeplanga.
Nceda uqaphele ukuba kukho i-futon epheleleyo etsalwayo ukuze iindwendwe ezongezelelekileyo zihlale kamnandi kumgangatho wesibini. Nceda uqhagamshelane nathi ukuze usazise ukuba iqela lakho lidlulile kweendwendwe eziyi-8.
Kukho indawo enkulu kakhulu yetropiki engqonge ipuli ekulungeleyo ukuhlala kuyo, ukujonga ulwandle okanye ukumangaliswa zizo zonke izilwanyana zasendle kuquka ukutyelelwa yonke imihla kwe-Mobile Titi 's iintlobo ezinqabileyo ezinokufumaneka apha kuphela kwindawo yeManuel Antonio kwaye ziphumelela ehlathini elijikeleze le ndlu. Kukho amagumbi okulala ayi-4 endlini kunye neebhafu ezintathu ezipheleleyo, zonke zibethwa ngumoya.
Kunzima kakhulu ukufumana amakhaya adibanisa izinto eziyimfihlo, izicwangciso zehlathi kunye neembono kunye neCasa Mono Titi enika yonke into.
Sinikezela ngenkonzo ye-concierge yasimahla ukuze ikuncede ngaphambi kokuba ufike nangexesha lokuhlala kwakho.